काठमाडौंमै सार्वजनिक बसमा हस्तमैथुन गरि युवतीको कपालमा वीर्य स्खलन, भिडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र विरोध – KhabarTime
हामीलाई अरू ब्राण्ड होइन, “नेपाली कलाकार, राष्ट्रकाे गाैरब” भन्ने अनुभूति दिने ब्राण्ड चाहिन्छ
काठमाडौंमै सार्वजनिक बसमा हस्तमैथुन गरि युवतीको कपालमा वीर्य स्खलन, भिडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र विरोध
काठमाडौं । पछिल्लो केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोका कारण मानिसहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् । सो भिडियोमा अनैतिक कार्य गरिएको देखिएको छ, जसप्रति महिला र पुरुष दुवैले आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई पक्राउ गरि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । महिला हिंसाको घटना समेटिएको सो भिडियोले आफूहरुको शिर निहुरियाएको भन्दै पुरुषले नै उक्त कार्य गर्नेलाई पक्राउ गर्न भनेका छन् ।
के देखिन्छ भिडियोमा ?
एक व्यक्तिले ललितपुरको डल्लु–लगनखेल रुटमा चल्ने अनुमान गरिएको सार्वजनिक यातायातभित्रै हस्तमैथुन गरेर युवतीको कपालमा वीर्य स्खलन गरिएको भिडियोमा देखिन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिले नै खिचेको उक्त भिडियोमा देखिएअनुसार बस बिसौनीमा बिसाइरहेको एउटा खाली बसमा महिला चढ्दै गर्दा ती पुरुष पनि चढ्छन् र पछाडि बस्न नपाउँदै आफ्नो पाइन्ट खोलेर अनैतिक क्रियाकलाप गर्न थाल्छन् ।
उनले बारम्बार आफ्नो क्यामरा ती महिलातर्फ देखाउँछन् । तर ती महिलालाई आफ्नो पछाडि के भइरहेको छ, त्यसबारे अत्तोपत्तो छैन । महिलाको कपालमा वीर्य स्खलन गरेपछि उक्त भिडियो समाप्त हुन्छ ।
आफूले खिचेको भिडियो सामाजिक संजालमा रवाफका निम्ति अपलोड गरेपछि यसमा थुप्रैले आपत्ति जनाएका छन् । यस मध्येकी एक हुन् पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बा । उनले यस्ता घट्नाले आफ्नो रगत तताउने गरेको बताइन् ।
उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘ पुरुषले सार्वजनिक स्थलमा हस्तमैथुन गरेको भिडियो आफैंले खिचेर प्रतिष्ठाको रुपमा पोष्ट गरेको घटना साँचो हो ? मैले यो भिडियो त हेरेकी छैन तर यसबारे समाचारहरु फैलिरहेका छन् । यस घटनाबारे मूलधार पत्रिकाले कुनै समाचार बनाएका छैनन् र घटनापछि कुनै रिपोर्ट गरिएको बारे पनि कुनै खबर आएका छैनन् । हामीले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित बनाउनुपर्छ र महिलालाई लड्न सिकाउनुपर्छ । यस्तो घटनाबारे सुन्दा मेरो रगत तात्छ ।
मुम्बइमा सुरविना: मुम्बइको रमझमले छपक्कै छोएपछि
बैदेशिक रोजगारको सुनाैलो अवसर! मकाउ र युएइमा सेकुरिटी गार्डको राम्रो तलब सुविधा। जानकारीका लागि डिमाण्डमा हेर्नुहोला